Ahoana ny fomba fivezivezena soa aman-tsara amin'ny taona 2020? Aza mikoropaka
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ahoana ny fomba fivezivezena soa aman-tsara amin'ny taona 2020? Aza mikoropaka
Misy zava-misy vaovao amin'ity folo taona ity ho an'ny mpandeha sy ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany raha ny amin'ny fiarovana sy filaminana.
Ny fizahantany dia ny fahafinaretana mankafy fitsangatsanganana sy fitsidihana toerana vaovao sy manintona vaovao. Ny traikefa tsara momba ny dia dia tsy ny mijery ny sorokao sy ny tahotra. Ny fizahantany dia momba ny fandraisam-bahiny: ny fandraisana olona tsara dia avy amin'ny fikarakarana ny vahinintsika.
Orinasa lehibe koa ny fizahan-tany, ny fampihorohoroana ary ny ady.
Ny folo taona vaovao dia tsy natomboka mangina teo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Ao anaty tahotra ny mpandeha ao amin'ny faritry ny Golfa, niaina horohoron-tany nahatsiravina i Puerto Rico izay tsy vitan'ny nahafaty olona iray farafaharatsiny fa nandroaka ny tariby mandeha amin'ny herinaratra nosy.
Ottawa, Canada dia niaina fitifirana.
Ny ady 40 taona nifanaovan'i Etazonia sy Iran dia niditra tamin'ny dingana vaovao ary mety hampidi-doza.
Fiaramanidina mpandeha Okrainiana nianjera afniainga avy tao Teheran, namono ireo mpandeha 176 rehetra. Iraniana 82, kanadiana 63 ary Okrainiana 11 no maty tamin'io fianjerana io, hoy ny bitsika nataon'ny minisitry ny raharaham-bahiny Okrainiana Vadym Prystaiko.
Ny Alarobia maraina ny filoha amerikana Trump dia nitory tamin'ny vahoaka amerikana sy an'izao tontolo izao, anisan'izany i Iran minitra lasa izay, nilaza fa tsy nisy amerikana novonoina tamin'ny fanafihana ny tobin'ny tafika amerikana omaly.
Nanokatra varavarankely ny filoham-pirenena Trump mba hifandraisana sy hiasa miaraka ary nanambara ny sazy henjana ary nidera ny lova sy ny vahoaka Iraniana.
Fanamby lehibe izany ary fotoana iray ihany koa ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany.
eTN Safertourism Dr. Peter Tarlow dia manana ireto hevitra manaraka ireto momba ny zava-misy ankehitriny
Na dia toa tsy misy ifandraisany aza ny fanafihana balafomanga Iraniana sy ny fianjeran'ilay fiaramanidina, ny lohateny toy ny hoe "Fahafatesana ao anaty rivotra" dia nanjary fahatsapana tsy fahafaham-po teo amin'ny vahoaka mpanao dia lavitra.
Ity ady ataon'ny hetsika ara-toekarena, teny ary bala ity indray mandeha indray mandeha dia niditra tamin'ny dingana vaovao tamin'ny fanafihana balafomanga iraniana tamin'ny tafika amerikana tany Irak. Ireo mpahay tantara amin'ny taona ho avy dia hahita zavatra betsaka hamakafaka sy hiadian-kevitra momba ny antony, ny fanomezan-tsiny ary ny vokatr'ity toko vaovao ity ao anatin'ireto fifandrafiana efa am-polony taonany maro ireto.
Ity lahatsoratra ity dia tsy mikasa ny hamakafaka an'io ady efa-polo taona io fa ny hijery fotsiny ny fanoherana mitohy amin'ny fomba fijerin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Ny fizahantany dia miankina amin'ny lafin-javatra maro, ka anisan'izany ny tontolo azo antoka sy azo antoka. Manana safidy ny mpitsidika ary rehefa misy olana momba ny heloka bevava, fampihorohoroana na fahasalamana tafiditra ao anaty sary, dia mety hifidy toerana hafa ny mpitsidika. Ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia efa ela ny fifandraisana mankahala fankahalana amin'ny indostrian'ny fiarovana sy fiarovana. Matetika ny matihanina amin'ny fitsangantsanganana sy be fizahana dia tsy nandoa afa-tsy ny tolotra am-bava fotsiny amin'ny olan'ny fiarovana ny fizahan-tany, afa-tsy rehefa lasa vaovao be ireny resaka ireny ary eo ny tahotra ny ho very laza sy ny mpanjifa. Fanamafisana ny filaminan'ny fizahantany
Ireo mpahay tantara momba ny fizahantany dia mety hiantso ny fihetsikao amin'ny fiarovana ny fizahan-tany sy ny fahaizantsika (na tsy fahafahantsika) miaro ny fotoana faritan'ny fizahan-tany ataon'ny besinimaro. Na eo aza ny fiheveran'ny olona maro fa ny fiarovana ny fizahantany dia be lavitra noho ny fampidirana fitsipika fanampiny ho an'ny vahoaka mpanao dia lavitra izay efa diso fanantenana. Ny fiarovana ny fizahantany dia lohahevitra sarotra iray izay mampifangaro ireo singa tsy mihetsika toa ny fakan-tsary CCTV (fahitalavitra mihidy), fahalalana ara-tsaina sy ara-tsosialy ary fampandrosoana politika ampahibemaso. Satria ny fitsangantsanganana sy ny fizahan-tany dia mamakivaky ny sisintany nasionaly, izay misy fiatraikany amin'ny firenena iray dia mety hisy fiatraikany amin'ny tany manontolo Zava-dehibe noho izany ny fifaneraseran'ny matihanina fizahantany amin'ireo matihanina momba ny fiarovana ny fizahantany ary hanavao ny politikany amin'ny fomba ahafahan'ny besinimaro mitsangantsangana fa miahy ny indostrian'ny fizahantany. Ireto misy sosokevitra vitsivitsy momba ireo zavatra mety tadiavin'ny indostria
Aza mikoropaka. Tonga ary mandeha ny lohateny ary izay toa krizy lehibe amin'ny andro voalohany dia mety tsy dia krizy intsony amin'ny "ampitson'ny ampitso". Alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra rehetra manangona loharanom-baovao betsaka araka izay azo atao avy amin'ny loharanom-baovao isan-karazany ary raiso an-tsaina fa manana fitongilanana mahatsiaro tena sy tsy mahatsiaro tena koa ny media. Fantaro fa ny fiarovana ny fizahan-tany tsara dia ampahany tena ilaina amin'ny marketing amin'ny taonjato faharoapolo. Ireo mpiasa matihanina amin'ny fizahantany dia mila mangataka amin'ny mpikarakara ny fihaonamben'izy ireo hanome azy ireo ny fiarovana ny fizahantany raha te hifaninana amin'ny taonjato fahiraika amby roapolo. Raha tsorina, raha tsy misy fiarovana ny fizahan-tany dia tsy hisy sisa amin'ny tsena.
Mianara amin'ny hafa ary ampifanaraho amin'izay ilainao eo an-toerana. Betsaka ny zavatra azontsika ianarana avy amin'ireo teknikan'ny fiarovana israeliana raha ny dia no jerena. Ohatra, ny mpandeha fiaramanidina mandeha sy miverina avy any Israel dia tsy mila mandalo fahatezerana maro izay tsy maintsy ialan'ny fliers tandrefana, kanefa ireo mpandeha ireo ihany dia heverina ho azo antoka kokoa, na amin'ny tany na amin'ny rivotra. Anisan'ny fahombiazan'ny Isiraely ny fandalinana ny ataon'ny hafa ary avy eo mampifanaraka ireo teknika ireo amin'ny filàna eo an-toerana. Ny fiarovana ny fizahan-tany tsara dia manome mpizaha tany matihanina avo lenta, teknika famotopotorana tsara indrindra ampiarahana amin'ny teknolojia avo lenta ary fiofanana tsara. Ny indostrian'ny fizahantany manerantany dia mila mianatra ny fomba hanarahana izany.
Tsy mitovy ny heloka bevava sy ny asa fampihorohoroana. Amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany, ny mpanao heloka bevava dia mila ny indostrian'ny fizahan-tany izay itazonany fifandraisana parasy. Na dia mipoitra ao am-pon'ny indostrian'ny fizahantany aza ny heloka bevava, tsy mitady hanimba azy izany. Eny tokoa, maro ny karazana heloka bevava voarindra no nihevitra fa fomba fizahan-tany mora ampiasaina amin'ny famoahana vola ny fizahantany. Ny fampihorohoroana kosa dia mitady hanimba ny fizahantany. Ny tanjony dia ny hampisaraka ny olona ary hametraka fahasimbana ara-toekarena betsaka araka izay azo atao mba hamotehana ny fahaizan'ny ekonomia eo an-toerana ho ampahany amin'ny tetikady ady amin'ny fanoherana ny maoderina.
Ny fampihorohoroana dia mitaiza olana izay mety hiaraka amintsika mandritra ny fotoana ela. Na eo aza ny lazain'ny mpanao politika, ary mety hitaky ny vahoaka, ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany dia tsy azo porofoina fampihorohoroana 100% mihitsy. Ny tena azontsika antenaina hatao dia ny hampivelatra fomba marani-tsaina sy mamorona hanakiviana ny fampihorohoroana. Ny Isiraeliana dia nanolotra an'izao tontolo izao lesona lehibe mbola tsy ianarana: ny fiarovana ny fizahan-tany dia tsy ny fifantohana amin'ny zavatra ratsy fa ny fanakanana ny ratsy fanahy.
Tsy adala ny mpampihorohoro ary mahay manavao. Ny fanafihana mpampihorohoro amin'ny Andro Krismasy dia tokony hoheverina ho ohatra iray hafa fa tsy afaka miantehitra amin'ny fepetra fiarovana ihany ny fanoherana ny filaminana. Ny fiarovana ny fizahantany dia mitaky famoronana sy fanavaozana.
Ny fihetsika tafahoatra dia sakaizan'ny mpampihorohoro indrindra. Na eo aza ny zava-misy fa ny fiaramanidina dia niadana tamin'ny fomba fijery fizahan-tany mbola nandresy ilay mpampihorohoro. Nahomby izy tamin'ny fampitahorana ny besinimaro ary nahatonga ny dia tsy dia irina sy sarotra kokoa. Hafa noho ny asa ratsy ny fampihorohoroana. Ny tanjon'ny asa fampihorohoroana dia ny famotehana ny toekarem-pirenena. Satria ny fizahan-tany dia indostria lehibe eran'izao tontolo izao ary manome fotoana betsaka asa manerana izao tontolo izao fitsangatsanganana ary fizahan-tany dia ho lasibatra mpampihorohoro hatrany. Fantatry ny mpampihorohoro fa ny fanafihana ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany dia tsy handratra ny toekarena marobe fotsiny fa hahazo dokambarotra be koa, amin'izay vao hanimba ny toekarenan'ilay niharam-boina.
Fantaro ny atao hoe fiarovana ny fizahantany. Betsaka loatra ireo matihanina amin'ny fiarovana izay mahalala ny filaminana nefa tsy mahalala ny fomba "handikana" ireo hevitra fiarovana amin'ny filan'ny fizahan-tany. Amin'ny lafiny ilan'ny boky, ny matihanina amin'ny fizahantany matetika dia tsy mahalala ny fomba fiasan'ny fizahan-tany, ny antoka ary ny fiarovana. Satria ny ankamaroan'ny matihanina momba ny fizahantany dia nampiofanina tamin'ny marketing, matetika izy ireo no very hevitra momba ny dingana tokony sy tsy tokony harahiny, ary ny fomba tokony hifandraisany amin'ireo matihanina amin'ny fiarovana. Mpiasa fizahan-tany maro no tsy mahalala firy momba ny lohahevitra ka tsy hainy na dia ny fanontaniana marina apetraka aza.
Manatreha iray amin'ireo fihaonambe fiarovana ny fizahan-tany manerantany. Las Vegas dia mitazona ny filaminan'ny fizahan-tany isan-taona amin'ny 26-29 aprily. Manatrika fihaonambe iray momba ny fiarovana mamela ny tompon'andraikitra fizahan-tany, ny polisy, ary ny matihanina amin'ny fiarovana mba hianatra momba ny fironana sy ny dinamika vaovao indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahantany ary hifanakalo hevitra sy hevitra. Satria matetika ny teti-bola arak'asa momba ny fiarovana dia tery, eritrereto ny hanome vatsim-pianarana ho an'ny polisy na fisoratana anarana sy / na seranam-piaramanidina mpiasan'ny fiarovana ny fizahan-tany hafa.
Fanazavana bebe kokoa momba www.owusu-ankafty.org/
Aza adino velively fa tsy misy fitehirizana vola sahaza ny fiainana iray. Ny fiarovana ny fizahantany dia tsy resaka fitsangatsanganana azo antoka ihany. Mikasika ny famonjena aina izany. Rehefa mamolavola drafitra marketing-fizahan-tany dia aza adino mihitsy fa afaka misarika fanentanana ratsy fampiroboroboana isika, manova doka, na mahita teny filamatra vaovao, fa tsy afaka manolo fiainana mihitsy isika. Ny fizahan-tany dia momba ny fandraisam-bahiny ary ny fandraisana tsara dia avy amin'ny fikarakarana ireo vahinintsika.
Misimisy kokoa momba ny fizahantany azo antoka www.fioritsourism.com